Nika isipho nge-44 XBox 360. Ungayiphumelela njani i-Xbox 360 yasimahla ngeMSN kunye neBuddy | Iindaba zeGajethi
Hoy Ndifuna ukukuxelela indlela yokuthatha inxaxheba kwi zoba i44 XBox 360Nangona zikho nje i-Xbox ezingama-28 ezishiyekileyo ngoku, enye i-16 sele ihanjisiwe kwimizobo emine esele yenzekile. Rhoqo ngeentsuku ezili-15 kuyakubakho i-raffle eya kuthi ibonise abaphumeleleyo aba-4 kwikhonsoli ye-XBox, abaphumeleleyo aba-4 kwiiWebhu zeWebhu kunye nabaphumeleleyo aba-2 kwiXbox Messenger Kit. Nangona kwiziseko ezibizwa ngokuba zii-Xbox consoles kwaye ingezizo ii-XBox 360 consoles kufuneka ndicinge ukuba kukusilela okulula kuba kwiwebhusayithi yokhuphiswano kukho ireferensi ebonakalayo kwi-XBox 360 consoles.
PUkuthatha inxaxheba kwiiraffles kufuneka uye ku ww.vivelive.com/encuentraabuddy kwaye ubhalise. Oomatshini bokhuphiswano kufuneka babanike ingqalelo ngelixa behamba ngamajelo e MSN ukuba ubona i UBuddy, unodoli we-Messenger eluhlaza, kwaye ukuba ubona nayiphi na, cofa kuyo kwaye iyakwandisa ikhawuntara yakho yabahlobo. Xa ufumana abahlobo abali-10 uya kuba nakho ukufikelela kwiWindows Live Emoticon Factory kwaye uya kungena kwimizobo yeeveki ezimbini yeekhonkco ze-Xbox, ii-webcams kunye neekiti ze-Messenger.
UNje ukuba uneBuddies ezilishumi kunye neBuddy nganye eyongezelelweyo oyifumeneyo, uya kuphumelela omnye ukuthatha inxaxheba kumzobo wale veki zimbini. Umzekelo, ukuba ufumana abahlobo abangama-43, uya kuba namangenelo angama-34 kumzobo wobusuku obukubo. Ngale ndlela, abahlobo obafumanayo kwezi ntsuku zilishumi elinesihlanu, kokukhona kuya kufuneka ukhethe ngakumbi. simahla i-Xbox 360.
CNjengoko sele nditshilo, konke okufuneka ukwenze ukuze uthathe inxaxheba kumdlalo ukubhalisa. Inkqubo yokubhalisa kunye nokuthatha inxaxheba kukhuphiswano simahla, ke ukuba unayo le bug kwaye ufuna ukuzama ithamsanqa, masibone ukuba uyivula njani iakhawunti ukuzama ukuphumelela i-Xbox.
1) Yiya kwiphepha lomncintiswano elithi ww.vivelive.com/encuentraabuddy. Xa ulapho unganqakraza kwiqhosha leorenji «Bhalisa ngoku!» okanye kwithebhu ephezulu yefestile ethi "Ubhaliso".
2) Ifestile iyakutshintsha kwaye uyakubona ithebhu yoBhaliso. Kufuneka ugcwalise BONKE amasimi aneenkcukacha eziyinyani, ukuba ufaka idatha engeyonyani kwaye uphumelele i-raffle, abayi kuba nakho ukukuthumelela ibhaso kwaye ukuba kukho ingxaki awuzukukwazi ukubanga.
Kuya kufuneka ubeke igama nefani, idilesi yakho yonke kunye nenombolo yomnxeba. Emva koko kuya kufuneka unike i-imeyile (i-imeyile), ukuba awunayo i-imeyile unokwenza i-imeyile ye-Hotmail ngokufunda le ncwadana ilandelayo «Uyenza njani i-imeyile eshushu» Ngubani VinagreAssino.com. Okulandelayo kuya kufuneka wenze iphasiwedi ukufikelela kwiakhawunti yakho kukhuphiswano, kodwa UKUQAPHELA, akufuneki ufake ipassword ongena kuyo kwi-imeyile yakho kodwa entsha oyisebenzisayo ukufikelela kolu khuphiswano. Qaphela kakuhle kuba uza kuyidinga kamva ukuze ube nakho ukufikelela kwiakhawunti yakho kukhuphiswano. Okokugqibela, kuya kufuneka ufunde iimeko zomthetho kwaye ukuba uyavuma, jonga ibhokisi "Ndiyazamkela iimeko zomthetho". Emva koko nqakraza kwi-orange "Ngenisa" iqhosha.
3) Ukuba wenze konke ngokuchanekileyo, ifestile efana nale ingentla iya kuvela apho uya kwaziswa ukuba ubhalisile ngokuchanekileyo kwaye ukuze ungene uza kufuneka ufake idatha yakho kwibhokisi ebonakala ngasekunene kwefestile. Cofa kwiqhosha leorenji "Kulungile" kwaye uye kwibhokisi esekunene.
Faka i-imeyile kunye negama lokugqitha, kodwa khumbula ukuba ayililo igama eligqithisiweyo le-imeyile yakho kodwa lelo ubudalele ukubhalisela ukhuphiswano. Emva koko cofa kwiqhosha elibomvu "Faka".
YIakhawunti yakho uyenzile ngoku, kufuneka ukhangele abahlobo bakho kumajelo eMSN, ukwenza oku, uye ku www.knqala.es kwaye ukhangele amajelo aboniswe kumfanekiso ongezantsi (uphawulwe ngombala obomvu).
A Ngamanye amaxesha kwamanye amaphepha kuya kuvela abahlobo kwaye emva koko kuya kufuneka ucofe kubo ukuze ubazingele. Baninzi abahlobo kodwa bafihliwe kwaye kunzima ukufumana. Apha ungabona enye ebonakale kwicala lasekhohlo lescreen sam ngelixa ufunda iindaba zemidlalo.
CIsikhukukazi ubona nawuphi na uBuddy, cofa kubo kwaye kuya kukuthatha kwi «Fumana uBuddy! apho kuya kufuneka ungene kunye ne-imeyile yakho kunye negama lokugqitha. Ke abahlobo bakho bakhawuntari baya kunyuka.
Aabanye ecaleni kwenani labahlobo obafumeneyo baya kuvela ixesha elishiyekileyo kude kube kugqityiwe i-Xbox raffle. Khumbula ukuba ufuna abahlobo abalishumi ukuze uthathe inxaxheba kwirafuli kwaye ukusukela kwabo balishumi, kokukhona kufunyanwa abahlobo, amathuba okuphumelela. Ukuzoba okulandelayo kuya kuba nge-10 ne-8 ka-Okthobha, nge-22 kaNovemba ne-5, nge-19 ne-3 kaDisemba, yonke ngo-17 nangoJanuwari 2007, 3. Thatha ithuba lokuba isekhona I-Xbox 360 ukubamba simahla, ngobuso, "ngobuso."
Skwaye lithuba lakho lokushiya uluvo ukuze ubhiyozele. Kwaye ukuba endaweni ye-Xbox ukhetha i-PS3, jonga olu khuphiswano. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Nika isipho nge-44 XBox 360. Ungayiphumelela njani i-Xbox 360 yasimahla nge-MSN kunye neBuddy
Ndingathanda ukwazi ukuba ufumana uBuddy useSpain kuphela. okanye inokusebenza nakwiLatin America. Enkosi
Molo u-Angie, inyani kukuba khange ndiqaphele ukuba kukho nasiphi na isithintelo sendawo sokuthatha inxaxheba kukhuphiswano kwaye yiyo loo nto ndingakhange ndiyikhankanye, kodwa ukuba ufunda imigaqo yonyuselo uyakubona ukuba kwindawo yayo yesine ithi kufuneka ubenjalo ohlala ngokusemthethweni eSpain ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano. Ukubulisa.
Ndifuna i-xbox 360 ngoku
Ndiyathemba ukuphumelela ubuncinci andikaze ndiphumelele iibhola kisiera ga naresta bes}
Andizange ndizuze nto
Ewe, jonga iiBuddies Miguel ukubona ukuba unethamsanqa kwaye ufumana enye ye-Xbox 360.
Kubonakala kunzima kum, njengowokuqala ukuphatha u-5600 buddy ...
Ndifumene ezintlanu kuphela ndaza ndazincama ndalahleka.
Andiboni mfondini naphina ...
Andifumani mfondini, kwaye uthi landela imikhondo kuba ndiye apho bandixelela khona, umzekelo, ezemidlalo kwaye akukho nanye. Kwaye ingaba njani i-alugnos sele inento engama-5.000 XNUMX….
Yimfihlelo yomhlobo ongazange uvele 😉
UJuan Sebastian sitsho
Ndihlala ndiphupha ngokuba ne-xbox endihlala ndiyiphupha
kwaye nceda wenze iphupha lam lizaliseke
Ndifuna i-xbox 360
jeison kunye nezinye sitsho
Nceda ndifuna ukwazi indlela yokuphumelela i-Xbox 360 ndiyifunayo
Israel dionicio melo gonzales sitsho
Ndiza kuyikhathalela kakhulu kuba ngowona mnqweno wam mkhulu ebomini, andingomntwana usisityebi, ewe, hayi ovela kwiklasi, ukuba ndiyayifumana, ndiya kuyixabisa kakhulu.
Ndive ukuzoba kakuhle kwaye ndinomnqweno wokuphumelela
Molo, ndingathanda ukufumana i-exbox 360
ULuis Fernando de la Cruz Marquez sitsho
i-oolap ndifuna i-x ibhokisi ye-360 nge ayizange ize bafuna ukuyifumana
Hayi, makube liphupha lam, felis elungileyo
Ndifuna i-xbox 360 kuba andifuni kuyithenga ju
Ndiyathemba ukuba ndizakudlala i-xbox 360 ye-k asii ingavuya kakhulu
Ndifuna ukuyiphumelela xk andinamali yokuyithenga kwaye xk umzala wam sele enayo kwaye ukuba uzisa iFIFA 9 angangoyena wonwabileyo kwiplanethi heh heh heh
Ewe, ndifuna ukufumana le Xbox kuba ndihlwempuzekile kwaye iphupha lam kukuba ne-xbox, yak, sinomvuzo ophantsi, kwaye kuba umama akanakundithengela, ndihlala nomama kuphela, nceda, mna Ndivela eTapachula, eChiapas, eMexico.
Molo, ndingathanda ukuphumelela i-Xbox kuba ndifuna ukuyinika unyana wam kwaye andinamali yokumthengela.
UJuan Andres sitsho
Ndifuna ukuphumelela i-Xbox nceda
Phezolo ndiphuphe ngathi ndiphumelele i-xbox360 ekhupha ne-pastes hayi enkosi
yeyiphi enye into ongathanda ukundinika yona ukuba imnandi kakhulu